Nezve misiyano uye zvakafanana. Kubva paWordpress kuenda kuna Jekyll 4 | Linux Vakapindwa muropa
Nezve misiyano uye zvakafanana. Kubva paWordPress kuenda kuJekyll 4
Spoiler yambiro. Muzvinyorwa zvinotevera na dzino nei ini ndakatama kubva kuWordPress kuenda kuJekyll ndichabiridzira. Mutsara wekuti "skip the line" ndewemunyori James Altucher uye unoreva nzira dzinoverengeka dzinokutendera kuti udzidze chimwe chinhu nekukurumidza kupfuura maawa zviuru gumi zvainofanirwa kutora kuti uve nyanzvi pane chimwe chinhu. Imwe yadzo kutora kunze kweiyo equation izvo zvisingatendese iwe kuenda kumberi
Ndakatambisa tani yemwedzi ndichiedza kuteedzera iwo maitirwo ezvikamu zvakasiyana zvinoumba Jekyll kuti ndione kuti ini ndaisada.. Kune matoni ematimu eJekyll akagadzirwa nenharaunda, ini ndaingofanirwa kuteedzera chikamu chekodhi yandaida kugadzira yangu.
Iko kune zvakare zvishongedzo zvezvose zvido. Kusanganisira edhisheni yekuona iyo, isina kuve yakakwana seiya yemaneja zvemukati, inoita kuti basa rekunyora zvinyorwa uye kuwedzera mifananidzo zvive nyore.
Pfungwa yakakosha yekuisa mupfungwa nemapulagi nematimu. Uyen WordPress yakaremerwa pane server uye inoda dhatabhesi. Izvi zvinotora nzvimbo uye zvinomiririra ingangoitika njodzi yekuchengetedza. NaJekyll ma plugins uye madingindira ari pakombuta yebasa. Izvo zvakaiswa zvatogadzirwa kare mapeji ewebhu.
Gumbo rechitatu rekuenzanisa uku mafomu. Iko kune toni yematemplate akatogadzirirwa iwo masystem uye zvese zvaunofanirwa kuita kugadzirisa neruoko. Asi, zvinotora nguva yakawanda.
1 Nezve misiyano uye zvakafanana. Kuiswa
1.1.4 RHEL 8 / CentOS
Nezve misiyano uye zvakafanana. Kuiswa
Izvo zvinodiwa zvekuisa WordPress zvinotevera:
PHP vhezheni 7.4 kana yepamusoro.
MySQL vhezheni 5.6 kana yakakwira OR MariaDB vhezheni 10.1 kana yepamusoro
Kazhinji, vazhinji vanopa webhu vanopa vanoshandisa Apache kana NGNIX semaseva ayo anotendera iwe kuti ushandise WordPress. Asi, kana iwe uchida kuyedza imwe nzira, chero bedzi ichizadzisa zvinodiwa pamusoro, ichaita.
Mune dzidziso iwe unogona kuve neWordPress kuisirwa pakombuta yako yemuno kuti ugadzire zvemukati wozozviisa kuseva. Asi, nyasha dzevatariri vezvinyorwa ndezvekuti iwe unogona kushanda zvakananga mune yavo yekutonga panin.
Nhasi, vanogashira vanopa vanopa zvirongwa neWordPress ratove rakaiswa kana otomatiki kuisirwa zvinyorwa Chemhondoro Softaculous. Iwe unongofanirwa kupedzisa ruzivo rwavanokumbira uye mumaminitsi iwe une saiti yakaiswa uye wakagadzirira kuenda.
Kana iri yekuisa manyore, iwe unofanirwa kuve nechokwadi chekuti yazvino vhezheni yePHP yakaiswa uye kumisikidza dhatabhesi. Zvese izvi mune control panel yemupi wako wekutambira. Ipapo iwe uchafanirwa kurodha pasi WordPress uye kugadzirisa iyo yekumisikidza data. Wobva waisa ese mafaera kuburikidza ftp kune server.
Chekupedzisira, iwe enda kune webhusaiti uye upedze iyo ruzivo iyo yainokumbira.
Nzira yekuisa Jekyll ndeinotevera:
Ruby vhezheni 2.4.0 kana yakakwira
GCC uye Ita
sudo dnf install ruby ruby-devel openssl-devel redhat-rpm-config @development-tools
RHEL 8 / CentOS
sudo emerge -av jekyll
sudo pacman -S ruby base-devel
sudo zypper install -t pattern devel_ruby devel_C_C++
sudo zypper install ruby-devel
Nezve kugashirwa kwenzvimbo yakaburitswa naJekyll. Izvo chete zvinofanirwa kuenderana neiyo HTTPS protocol. Ichi hachisi chinhu chinodiwa neJekyll, mabhurawuza azvino haaratidze saiti dzisingashandise iyi protocol. Izvi zvinoreva kuti wako wekutambira mupi anofanira kukuvimbisa imwe nzira yekuwana yeruzhinji kiyi chitupa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Nezve misiyano uye zvakafanana. Kubva paWordPress kuenda kuJekyll 4
Zvakajeka kusvika parizvino, kunze kwekunge ini ndisati ndanzwisisa kudiwa kwegcc uye kugadzira ..
Inoshandiswa naJekyll kugadzira mafaira eprojekti